Indawo yokugcina ye-Android yoVimba-amaLungelo oLuntu kunye nobuGcisa bokuKhanya ngu-∴ PixelHELPER Foundation
Iposi ekhuniweyo By Oliver Bienkowski On 19. January 2020
Ukudilizwa ngabantu aba-bulldozers aba-2 ngommandla weMorocco. I-obelisk yayiyi-sundial kwaye ayinanto yokwenza nesikhumbuzo se-Uygur.
Nangona uninzi lwamaSilamsi luhlala eMorocco, i-Uighurs ayixhaswanga e-China. Sazakhela isikhumbuzo soku, esathi saqwalaselwa kuphela ngamajelo eendaba aseArabhu emva kokuba iphephandaba I-Israel lazisa ngendlela efanayo kwisikhumbuzo sase-Berlin Holocaust. I-BBC Arabic ibike ingxelo ngeprojekthi. Oku kubangele ukuba i-boomerang yamaphepha-ndaba aphesheya ibe apho ukugubungela kwakungasagxili kwii-Uyghurs kodwa kwi-Israel / Palestineambano. Umsebenzi wobugcisa uphumelele!
Ibali lokuBulawa kwabantu ngenkohlakalo eMoroccan kwiWikipedia alizange likhankanye iinkampu ekusetyenzwa nzima kuzo entlango apho kwafa khona amaJuda. Isikhumbuzo sethu satshatyalaliswa nguMphathiswa Wezangaphakathi waseMorocco emva konyaka wokwakha. Sizise umxholo wokunyanzelwa kwimbali yaseMorocco kwiWikipedia ukuze kuliwe nembali yokuchasa kunye nokuchasana nobuJuda. Kwaye nangona yayilubugcisa ukufakwa kwasekuqaleni ukubonisa ukuphulwa kwamalungelo oluntu yi China ngokuchasene nee-Uyghurs.
I-boomerang yobugcisa yaphinda yabhabha i-arc yokudala yokulwa ubuhlanga kunye nokubalula abasebenzi abanyanzelekileyo ngaphakathi eWikipedia.
Ngelishwa, iMorocco ayizazi iindlela ezinjalo zobugcisa bokwenza. Iqela
Kwisiza sethu saseMoroccan, ngemifanekiso eqingqiweyo yesakhiwo se-Orthanc esivela kwiNkosi ye-Rings, abasemagunyeni eMoroccan benza ubomi bube nzima. Ikhitshi lesonka elinabantu abangama-500 abavela kwi-THW yaseJamani lahluthwa, ingcwaba lomsebenzi waseJamani onenkqubela-phambili yatshabalaliswa kwaye indawo yokubhaka enikezela uncedo, apho abantu baxhamla ngokuthe ngqo, yadilizwa yawa emhlabeni.
Kwiinkampu ekusetyenzwa nzima kuzo eMorocco, amawaka abantu bafa besebenza kuloliwe weSahara. Ngenxa yoko, i-Morocoa inembali ye-Holocaust. Babiza iBouarfa ngokuba yiAuschwitz yentlango
Vula ileta kuKing Mohammed 6 waseMorocco.
Mntundini Ophakamileyo u-Mohammed VI, ubuGcisa ayilolwaphulo-mthetho. Umbutho wethu waseJamani wamalungelo oluntu kunye nokukhuthaza ubugcisa nenkcubeko ngokungxamisekileyo kufuneka ukhalaze kuwe malunga nokwaphulwa kwamalungelo oluntu eMorocco. Yonke le nto iqale ngekhitshi lesuphu elishenxayo eAfrika, athe amagosa akho amasiko aseTangier athimba ukusukela ngoMeyi 2018 kuba bekufanele ukuba sifuna ukuthengisa isuphu yorhwebo eMarrakech. Kunyaka ngoku sibabonile abantu besitya kumgqomo wenkunkuma kwaye ikhitshi lethu lesuphu ngokuqinisekileyo beliya kubanceda abanye abantu ukuba bahluthe. Kutheni amagosa akho ediliza igadi yethu yobugcisa? Abasemagunyeni abakhange basiphendule isicelo sokwakha ngoSeptemba 2018. Yonke imihla besizama ukwenza uqhakamshelwano nabaphathi bakho kuwo onke amajelo elizwe avela ePalamente ngokusebenzisa oonozakuzaku bakho baseMoroccan, ebingasebenzi. Azange baphendule. NgoDisemba u-2018, umsebenzi wethu wophuhliso we-PixelHELPER uTombia Braide wasweleka kuba wayenomsindo ngokuziphatha kwabasemagunyeni kangangokuba wabulawa sisifo sentliziyo. Ewe wangcwatywa njengememorandam kungekho mntu okhoyo kwaye ityala labekwa kumngcwabi waseMorocco. Sakha isundial ngokumkhumbula, yatshatyalaliswa ziigandaganda zayo.Satyala imali eyi- € 100.000 eMorocco kunyaka nje omnye. Sisebenze ivenkile yokubhaka isonka enkonkxiweyo ukuqinisekisa ukuzinza kokutya eAfrika kwaye sanika ilali yethu isonka sasimahla yonke imihla. I-gendarmerie yakho ithatha iindwendwe kuthi izise kwisikhululo samapolisa ngezizathu zokuba akuvumelekanga ukusityelela. Udliwanondlebe ngezityholo undwendwe lwethu luya kuba ngumngcatshi kwaye iFreemason ayinyamezelwa. Emva koko kwabakho impama ebusweni bendwendwe lwethu. Iintatheli zithintelwe ukutyelela ipropathi yethu ngamapolisa amatyeli aliqela. Nangona sinawo onke amaxwebhu okufumana i-visa yotyalo-mali kwilizwe lakho, kubandakanya neminyaka emi-3 yokuqeshisa ngenketho yokuthenga, amapolisa akho afuna ukusigxotha nzima. Simemelela kwimbuyekezo ngentshabalalo kunye nokwakhiwa ngokutsha kwendawo yokubhaka izonka. Kuya kufuneka wazise amapolisa akho asekuhlaleni ukuba amagcisa akangobanqolobi. Kuba yindlela esiphathwa ngayo. Abasebenzi bethu boyikiswa ngokwasemzimbeni nguMkadem, isandla sasekhohlo seCaid, ukuba bangavali imingxunya yeendonga zethu zangaphandle. Kumnyhadala weSwekile, iqela lethu belifuna inaliti yomgada ngenxa yokulunywa yinja. Ngelishwa, isebe labo lezempilo e-Ait Ourir naseMarrakech lavalwa. Sifuna i-100.000 zama-euro ngokwakhiwa kwakhona kunye nokuxolisa kwintloko yamapolisa e-Ait Ourir kunye ne-caid e-Ait Faska. Abangaze bathethe bodwa kodwa banxibelelana nababukeli kuphela. Ngenxa yobundlobongela bamapolisa kulundwendwe lwethu, sifuna abasebenzi abali-100 esizikhethele bona kangangeminyaka eli-100 ukusuka eAit Faska naseAit Ourir ukuba basebenze kwiiprojekthi zethu zobugcisa.
Inkampu yabasebenzi abayinyanzelekileyo eMorocco. AmaYuda amaninzi afela apha.
Ehlotyeni i-1942 ityelele uGqr. I-Wyss-Denant International Red Cross Mission (IRC) ikhokele iinkampu zeBoudnib, Bououfa kunye neBerguent. Namhlanje akukho mntu ukhumbula ilanga kwezi lali ezikude.
Izulu elimnyama lenza isikhumbuzo se-Holocaust kwiyunithi enye. Iindwendwe ziyazula kwezi
Ukulinganiswa kwesona sikhumbuzo sikhulu sokufa kwabantu emhlabeni
Inkangeleko ngaphambi kwembubhiso. Ukwakha unyaka we-1 nge-10 Moroccans.
Kwakhona ukugquma okwenziwe nguWalter Lübecke kwatshatyalaliswa kwapeyintwa ngaphezulu. Iflegi ye-EU yaphukile emhlabeni.
Ngokupheleleyo bekukho iinkampu ezili-14 zeentlobo ngeentlobo ezinamadoda angama-4.000 kukhuseleko lwaseFrance lwaseMorocco. Owesithathu yayingamaYuda eentlanga ezahlukahlukeneyo. Amabanjwa ayengamadoda onke ngaphandle kweSidi Al Ayachi, eyayinabafazi nabantwana. Ezinye iinkampu zazigadiwe, okt iintolongo zokwenyani zabachasi bezopolitiko kulawulo lweVichy. Abanye babebizwa ngokuba ziinkampu zokudlula zeembacu. Ukanti ezinye zazigcinelwe abasebenzi bamanye amazwe. Okanye amaJuda kwinkampu yaseBou Arfa phantsi kweVichy, iTranssahara Railway yaba luphawu olubalulekileyo lokusebenzisana neReich yesithathu. Ngenxa yoko, kwakukho imfuneko enkulu yabasebenzi. Abo babengasenakusebenza kakhulu bafe.
Amawakawaka abantu baseSpain Republican baba noxanduva kumaqela abasebenzi bamanye amazwe ekwakheni nasekulondolozeni iitreyini zoololiwe. Isantya somsebenzi emva kokubaleka impindezelo kaFranco yayinobuqhophololo kwaye ingekho rhabaxa .. Abasebenzi baseSpain baguqulwa baba zizigwebo zokwenyani. AmaYuda agxothiweyo akuMbindi Yurophu kwaye amaKomanisi aseFransi atshintshelwa apho. Ubomi bemihla ngemihla apho babunzima. Uninzi lufe ngokuphathwa gadalala, ngokuphathwa gadalala, ngokugula, yindlala okanye linxaniwe, ukulunywa sisithsaba okanye ukulunywa yinyoka.
Indawo yokugcina izinto yaseBerguent (Ain Beni Mathar) yayiqhutywa liSebe leMveliso yezeMveliso. Yayibekelwe amaJuda kuphela (i-155 ngoJulayi 1942 kunye nama-400 ekuqaleni kuka-1943 ngokwengxelo yeCRI). “Kodwa loo ntuthuzelo yokomoya ayizange iyinciphise into yokuba inkampu yaseBergue yayiyeyona iphambili,” utshilo uJamaa Baida. Umnqamlezo obomvu wacelwa ukuba uvale, amaJuda ahlala eBergued, ngakumbi avela kumbindi weYurophu, ngaphambili abalekele eFrance. Amavolontiya oMkhosi wamanye amazwe abakhutshwa kwimikhosi emva koloyiso luka-1940 emva koko bavalelwa "ngenxa yezizathu zolawulo". Injalo imeko kaSaul Albert, ummi waseTurkey owafika eFrance ngo-1922. Wayevalelwe eBergua de wakhululwa ngo-Matshi 1943. Kwidayari yakhe ubhala athi:
"10. NgoFebruwari (1941): Amatye aqhekeziweyo imini yonke. Ngomhla wesibini ku-Matshi ...: Handover kwiqela lesihlanu elinamaJamani amaJamani. Andiyithandi kwaphela. Umsebenzi awufani; Kwafuneka senze i-ballast ... Ngo-Epreli 2th: Asinakubuphinda obu bomi. Ndinomkhuhlane, izinyo eliqaqambayo ... Nge-6 kaSeptemba: Rosh Hashanah: Akukho mntu wayefuna ukusebenza ... nge-Okthobha 22: khange atye ... "
Oonogada, uninzi lwabo babengamaJamani, baziphatha gadalala, banentiyo, kwaye babaphatha gadalala. "Ngebabezijoyine i-NS-SS eyaziwayo." Amanye amabanjwa abaleka, afika eCasablanca kwaye ajoyina imikhosi.
E-Boudnib, idolophu encinci enabemi abangama-10.000 274, izisele zomkhosi wangoku zingamangqina okugqibela kwinkampu yomkhosi wase-France. Abahlali abadala bagcina iziqwenga zememori: “Ndingakuxelela izinto ezimbini ngokuqinisekileyo. Iyokuqala yiphiko leBoudnib, elinamaYuda amaninzi. Okwesibini kukuba uninzi lweenkampu zedolophu zazifundiswe kumabanga aphantsi ”(iTel Quel Magazine No. 19, Meyi 25-2007, XNUMX).
UMaurice Rue, intatheli yobukomanisi, wayegcinwe apho. Usixelele ukuba "kumabanjwa angama-40 kwikota ezintathu yayingamaKomanisi, oonontlalontle kunye namaGaullists ngaphambi kokuba ama-40 amaYuda afike iinyanga ezimbalwa."
Emva kokubekwa kweMelika kwi-8. Ngo-Novemba u-1942 wajoyina iMorocco kwicala le-Allies. NgoJanuwari 1943, iiAllies zidibene kwinkomfa eyayiseCasablanca. Isivumelwano sobuchule kunye nesomkhosi sasayinwa. Kungekudala emva koko kuqala ngokuhlaselwa kweSicily (Operation Husky, Julayi 1943) isiphelo seYurophu sathatyathwa yiJamani.
Ulwakhiwo eBou Arfa aluphazanyiswanga kwaye iimeko azitshintshanga kakhulu zabangcono. Bahlawulwa ngcono kunokuba amabanjwa e-Italiya naseJamani athatha indawo yamaKomanisi kunye namaJuda. Nangona kunjalo, ukwakhiwa kweTrans-Sahara kuhlala kuyinto yesiqhelo. Iprojekthi, eyonyulwe njengengafanelekanga, yayekwa yiFrance kuphela i-1949.
Ngaphandle koko, iibheringi zachithwa ngokukhawuleza phakathi kokuphela kwe1942 kunye nokuqala kwe1943.
Isikhumbuzo sokuqala sokuQothulwa Kwesizwe eMantla eAfrika
Umqondiso ngokuchasene nabantu abatshutshiswayo abancinci kwihlabathi liphela. Ulwakhiwo lwesikhumbuzo sokuqala sobuNazi eMntla Afrika senzelwe ukuba sisebenze njengomthombo wolwazi malunga nokuBulawa Kwabantu Ngenkohlakalo kwizikolo nakubemi.
Xa ibhloko nganye ixabisa amagama aliwaka. NgoJulayi 17.07th, ulwakhiwo lwaqala kwisikhumbuzo sokuqala sokuBulawa kwabantu ngenkohlakalo eMntla Afrika. Sakha i-steles ukunika iindwendwe kwi-labyrinth ye-grey block imvakalelo yokungenakunceda kunye noloyiko lokufa ababenalo abantu kwiinkampu zoxinaniso ngelo xesha. Sifuna ukudala indawo eMntla Afrika ezisa ukukhumbula kwixesha ledijithali. Ababukeli bakhona ngomjelo ophilayo kwindawo yokwakha kwaye banokuchaphazela inani labasebenzi kunye neebhloko eziza kwakhiwa ngeminikelo yakho. Okukhona ubukela kwaye unikela, kokukhona isikhumbuzo sokuBulawa kwabantu ngenkohlakalo sikhulu.
Isikhumbuzo se-Holocaust eMarrakech kuthiwa sesona sikhulu emhlabeni. Amaxesha e-5 ubungakanani beSikhumbuzo sase-Berlin Holocaust kamva aya kuba kwisibhakabhaka samatye e-10.000 ejikeleze iziko lolwazi elifundisa iindwendwe malunga nokuBulawa kwabantu ngentshabalalo.
Umseki wePixelHELPER Foundation, uOliver Bienkowski, wakhangela isibongo sakhe kwindawo yogcino lwedatha yeYad Vashem wafumana amanye amangeniso, emva koko wajonga indawo apho iSikhumbuzo sokuQalwa Kwesizwe sase-Afrika safumana enye kuphela eMzantsi Afrika. Kuba kufana nesiqingatha sohambo lwehlabathi ukusuka eMorocco, wagqiba ekubeni akhe isikhumbuzo se-Holocaust kwisiza sePixelHELPER. Iipropathi ezingabamelwane azinanto, ngoko ke kukho indawo yokwakha okungenani i-10.000 yezulu.
Inkampu ekusetyenzwa nzima kuyo Bou Boufa Isikhumbuzo sokuBulawa kwabantu eMorocco Aprili 21st, 2020Oliver Bienkowski